ကိုကိုပေါက "နှစ်သိမ့်မှုနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ကျန်းမာရေးကိုဆိုလိုသည်" | RayHaber
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီတူရကီ Aegean ကမ်းခြေ35 IzmirKocaoglu: "Suburban နှစ်သိမ့်နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကျန်းမာရေးပြောပါ"
01 / 06 / 2018 35 Izmir, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, မြို့ပြရထားစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ, ဓါတ်ရထား
မြို့တော်ဝန် Aziz က Kocaoglu, အဆက်မပြတ်လေထုထဲတွင်ဒေသခံရွေးကောက်ပွဲတွေအတွက်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲသို့သူ့ဟာသူထည့်နှင့်မြို့တော်မြူနီစီပယ်ကတဆင့်နိုင်ငံရေးမှာစေ့စပ်အာဏာရပါတီအဖွဲ့ဝင်များမှတုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ စွပ်စွဲဖို့ဝန်ကြီး Eroglu "ဟုဝန်ကြီးထိုသို့သောအကဲဖြတ်၏မထိုက်မတန်။ အထူးသဖြင့်ရမ်ဇာန်လမြတ်၏နေ့, အဘယ်သူမျှမ unbecoming နှင့်အတူပါးစပ်အစာရှောင်တတ်သောဤအမှုအရာနိုင်ငံတော်သမ္မတမပါဘဲဖြေရှင်းမရနိုငျထူးအိမ်သင် Muharram "မြို့တော်ဝန် Kocaoglu စကားပြောက, စောင့်ဆိုင်းအပေါ်တူရကီလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်", "ဟု၎င်းကပြောသည်။
Izmir တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန် Aziz က Kocaoglu, အစီအစဉ်အပေါ်အရေးကြီးသောထုတ်ပြန်ချက်များဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ နိုင်ငံတော်သမ္မတအိမ်တော်နှစ်ဦးစလုံးအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကိုသွားတူရကီ, သူတို့ကမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး, ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သစ်တောရေးရာမြို့ပြဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့်ရေဝန်ကြီး Veysel Eroglu နေဖြင့်ကြိုးပမ်းလျက်ရှိမြို့ပြသက်တမ်းတိုးစီမံကိန်းများကိုကျော်ယူသူတို့ရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုအတွက်သပိတ်မှောက်ဖြစ်ကြောင်း Izmir Aziz က Kocaoglu နှင့်မြို့တော်ဝန် Kocaoglu အတွက်ပါတီအဖွဲ့ဝင်များကအာဏာရ၏ရွေးချယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအပြီးသတ် '' ့စွပ်စွဲချက်တက်ဦးတည်အများအပြားထွက်မိန့်မြွက်တော်မူ၏။
Izmir တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန် said:
"သူငယ်ချင်းအချို့ဆင်ခြေဖုံးတည်နေရာကိစ္စတွင်မှပူးတွဲ။ တရားဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီပြည်နယ်ဥက္ကဋ္ဌ Miller က၏ဦးခေါင်းကိုထားပါတယ်။ 'အလမ်းရထားနှင့်အတူပျော်ရွှင်အများပြည်သူအမြင် polling're နှစ်ဦးစလုံး၏တစ်ဦးကအရေအတွက်အား 5-10 စေခဲ့တာထက်မပိုပါဘူးစိတ်ဆိုးလမ်းရထားအသွားအလာခဲ့' 'မှတ်ချက်များအတွက်တွေ့ရှိရသည်။ ဓါတ်ရထားအလှူငွေ 130-140 အနီးဘတ်စ်ကားများဆုတ်ခွာပိုကောင်းနားလည်သဘောပေါက်ပါလိမ့်မည်ပင်နှင့်တကွ, မြို့မှဆောင်ခဲ့ကြ၏။ အဆိုပါလမ်းရထားနှင့်အတူစိတ်ကျေနပ်မှုဖြစ်ကြိုကြားကြိုကြားဖြစ်နိုင်ပေမယ့်တိုင်ကြားကြဘူး; ငါသည်သူ၏ကိုရွှေဆွဲချင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့လမ်းရထားရဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေး, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအချိန်, ကျနော်တို့နှစ်သိမ့်ခြင်းနှင့်ဗေဒ Izmir တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောအတိုင်းအတာဆောင်ကြဉ်းကယုံကြည်ကြသည်။ "
"ကျနော်တို့ကသူတို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်နောက်ဖေးကပြောပါတယ်အခန်းများ၏ကျမ်းပိုဒ်ဆန့်ကျင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပင်လယ်ကွေ့အပေါ်ခဲ့ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်နောက်ဖေးမဆိုဘူး။ အဘယ်သူ၏ဘာသာရပ်ကိစ္စရပ်များအိမ်နောက်ဖေးလျှင်, ပိုကောင်းတဲ့အလုပ်အကိုင်အသိတယ်။ ယခုပင်လျှင်ခန်း, အ AKP သည်လည်းငါတို့စီမံကိန်းကိုသည်အထိကျွန်တော်တို့ရဲ့စီမံကိန်းများကိုတရားစွဲ။ ငါတို့သည်လည်းသူတို့တဘက်၌ဥပဒေရေးရာတရားစွဲဆိုမှုကနေသတင်းအချက်အလက်များကိုပါ၏ တစ်ခါတစ်ရံတွင်သူတို့ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစားရှိနိုင်ပါသည်, သို့သော်ကျနော်တို့တဦးတည်းတိုင်ကြားချက်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး! ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်ကိုဆက်လက်။ အခန်းပေါင်းနှစ်ပေါင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်နောက်ဖေး 14 ကျနော်တို့မဟုတ်ပြုလေ၏။ "
"Aliaga Menderes ကျနော်တို့လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်လမ်းများနှင့် Boulevard ၌အကြှနျုပျတို့၏အလုပ်ကိုတားဆီးနေသည်။ အဘယ်အရာကိုရည်ရွယ်ချက်ဒီရွေးကောက်ပွဲအကြိုအပေါ်ပြုမိနေပါသည်, ငါမသိရပါဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့၏သံလိုက်အိမ်မြှောင်ကစားနည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ entry ကိုရရှိရန်နှင့်ငါတို့အဲဒီဒေသမှာဝင်မှကျွန်တော်တို့ကိုတားဆီးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သူတို့ထဲမှတစ်ဦး, သူကပြောပါတယ်၏တဦးတည်းက 'ငါဝင်ပါလိမ့်မယ်' 'ဖြစ်ပါတယ်' 'ငါသည်သင်တို့ကိုဆူးဒီမှာပေါ့' 'ဟုသူကပြောပါတယ်။ ကြှနျုပျတို့အဖြေကိုမျှော်လင့်ခြင်း, အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှအစီရင်ခံသည်, လိုအပ်သောမှတ်တမ်းများကိုစောင့်ရှောက်။ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရဲ့သင်တန်း '' အဆင်ပြေဒီသင်၏တာဝန်ဖြစ်ပါသည်, အလုပျမှာထားတော်မူ '' ကျနော်တို့ဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်, ငါတို့အပြီးကြည့်ရှုမည်မဟုတ်ပါ။ ငါပါလီမန်အဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူအစည်းအဝေးများခဲ့မြို့တော်ဝန်, နှင့်တကွ, ခရိုင်အတွင်းရှိရပ်ရွာသူကြီးများအား 30 ။ သူ Menderes အစည်းအဝေးများတက်ရောက်ရန်တစ်ခုတည်းသောမြို့တော်ဝန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ မြို့တော်ဝန်အကြားထိုသို့သောအပြုအမူ, မြို့ပြနှင့်ခရိုင်မြူနီစီပယ်အကြားဖြစ်မယ့်အရာဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုခံစားချက်, အလျင်အမြန်ဘယ်လိုတစ်ခုအကဲဖြတ်စေလိုလျှင်? ငါ Izmir ထားခဲ့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့သူချင်းနိုင်ငံသားများ, Aliaga နှင့် Izmir Menderes ကလူနှစ်ဦးစလုံး၏လူအများပြည်သူကဒီကပြောကြားခဲ့သည်။ ငါအချို့အချက်အပြီးအဆင့်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ရှိတယ်လို့ပဲ။ နိုင်ငံရေး, လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်နှင့်မြို့စီမံခန့်ခွဲခြင်းကျင့်ဝတ်များတစ်လောကလုံးကုဒ်အပေါ်အခြေခံသည်။ သူတို့အပြုအမူသို့ fit ပါဘူး။ အဘယ်အရာကိုမဲပေးတော်မူမည်ရှိရာလူမျိုးထဲတွင်မတ်လ 31 2019 Menderes Menderes ဖြစ်ပျက်လိမ့်မည် ငါသည်သူ၏သီထဲသို့ကျဖို့ရှိသည်။ လှပသောရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရသော်လည်း, သင်သည်လည်းတွေဟာအစာကြေဆုံးရှုံးရလိမ့်မယ်။ အဆိုပါရှိနေခြင်း, ဆုံးရှုံးမှုများမရှိခြင်းအတွက်, သင်သည်လည်းအကျဉ်းချုပ်မှရဖို့။ သငျသညျအလျင်တဆောဆုံးရှုံးသို့ယနေ့ရိုက်ထည့်ပါလျှင်အဘယ်သူမျှမရှိမြို့တော်ဝန်မှ unbecoming အမှုတို့ကိုပြု! ဒါဟာမြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့သည့်ကြေညာချက်၏ပြည်နယ်ညွှန်ကြားမှုကျနော်တို့ကဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ကြည့်ရှုပါ။ အဘယ်အရာကိုအရေးကြီးပါတယ် Izmir ၏အကဲဖြတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါသေချာပါတယ်; မတ်လ 30 2019 တစ်စုံတစ်ဦး၏မြို့တော်ဝန်အဖြစ်နံနက်ယံ၌ထိုအရပ်၌ငါထိုင်ရန်။ အချိန်ကိုကျနော်တို့စီမံကိန်းကိုပံ့ပိုးကူညီကြလိမ့်မည် '' ငါ Ozdere ဆိုပါတယ်ကမ်းခြေတည်းဖြတ်သွားတယ် '' ကိုရောက်လေပြီ။ ဤတွင်ကျွန်မဆန့်ကျင်ဘက်ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမေးဖို့: Metropolitan မြို့တော်ဝန် AKP, CHP မြို့တော်ဝန် Menderes ခဲ့ကြောင့်ပြောင်းရွှေ့စေမလဲ? အုပ်ချုပ်ရေးမှူး, အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး, ရဲတပ်ဖွဲ့ကြောင်းခွင့်ပြုပါသလော "
"ကျနော်တို့ကမြို့ပြအသွင်ပြောင်းအလုပ်၏ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံကိုအသုံးပြုပါ။ ဆောင်ရွက်သောဝဘ်ဆိုက်တရာရာခိုင်နှုန်းကသဘောတူသည်, ပိုင်ရှင်ဆန့်ကျင်ကန်ထရိုက်တာများနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုနှစ်ဦးစလုံးဆန့်ကျင်ကိုင်တွယ်တာဝန်ရှိသည်နှင့်အကျွန်တော်တို့ကိုစာရင်းစစ်ချုပ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီမံကိန်း၏ပထမအဆင့်အတွက်ပထမဦးဆုံးအိမ်များ, ငါတို့ဇူလိုင်လသြဂုတ်လအဖြစ်ကယ်နှုတ်တော်မူပါလိမ့်မယ်။ ငါတို့သည်လည်းပြီးခဲ့သည့်စနေနေ့ကဒုတိယဇာတ်စင်၏အုတ်မြစ်ချပေးခဲ့သည်။ ယခုအပတ်၏အာရုံစိုက်မှာကျနော်တို့Örnekköyယူပါလိမ့်မယ်။ အားလုံး Izmir7ကျနော်တို့ဒေသတလွှားအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဤအပထမဦးဆုံးဥပမာပါဝင်မှုနှင့်ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအတွက်ရာခိုင်နှုန်းကို 80 ပြီးနောက်ကြောင့် 90 အဆင့်အထိရောက်လာတယ်။ ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စံပြထားရှိမည်။ လူတိုင်းသည်ဤမှသားကောင်များ၏ရသောတစ်ခုမော်ဒယ်နှင့်အတူစိတ်ကျေနပ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ မော်ဒယ်တစ်ဦးအင်္ဂါရပ်လည်းရှိပါသည်။ နှုတ်ဖြင့်ဈေးကွက်ငှားရမ်းခလျှင်သူလည်းအားလုံးရှိလူမျိုးဖြစ်, နုအပြင်ဘက်ကန်ထရိုက်တာများအတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားအဖြစ်လက်ခံရရှိသမျှတန်ဖိုးကဆက်ပြောသည်။ အစိုးရကဘာမှအနိုင်ရပါဘူးပြောပါတယ်အနိုင်ရကြောင်းမြူနီစီပယ်ရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့မြို့ပြသစ်များအစားထိုးစိုက်ပျိုးအတွက်ပိုက်ဆံမလိုအပ်ပါဘူး, ရှိပြီးသားကျနော်တို့ကအခွင့်အာဏာရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးပိုက်ဆံဖြုန်း။ ကျနော်တို့ကမော်ဒယ်အဖြစ်တူရကီ၏ဥပမာလမ်းလျှောက်နေကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ '' မြို့ပြအသွင်ပြောင်းလုပ်မရနိုငျပါစေလို့မရဘူးများအတွက် AKP လက်ထောက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ "ဟုသူကသူတို့အလုပ်လုပ်နေကြသည်ဟုဆိုသည်။ ကျနော်တို့မြို့ပြအသွင်ပြောင်းလုပ်ပေးသူမ၏သို့ပြောသည်။ ကြည့်ဖို့တစ်ဦးကသူတို့: 541 ဟက်တာမြို့ပြသက်တမ်းတိုးဧရိယာအဖြစ်ကြေငြာပေမယ့်သူတို့တစ်တွေအဆောက်အဦစတုရန်းမီတာဖြိုချ။ သူတို့ဘာလုပ်ခဲ့သလဲ ကြီးမားတဲ့အပြတ်အသတ်ဇုန်ရှိခဲ့သည်။ တစ်ဦးစံဆောက်လုပ်ရေးမဖွစျနိုငျရှိခဲ့သည်။ သူတို့ကမရရှိနိုင်အာကာသသို့သူမ၏လှည့်။ သူတို့ကပြည်နယ်ဘဏ်အတွက်အများပြည်သူမြေလွတ်အားဖြင့်တင်ဒါမှထွက်သွားကြ၏။ အခုတော့သူတို့ကသူတို့ကိုအိမ်ရာရောင်း။ ဤသည်မြို့ပြအသွင်ပြောင်းမဟုတ်ပါ! အစ္စတန်ဘူလ်၌မမြို့ပြအသွင်ပြောင်း။ မြေပြိုမှုဧရိယာထဲမှာအိုးအိမ်စေရန်အလွန်နေမကောင်း-အကြံပြုသည်။ ကျွန်မဘာမျှမဖြစ်ပျက်မျှော်လင့်ပါတယ်! နိုင်ငံသားများကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံသားတွေ .. မှားယွင်းနေလျှင်သင်သည်အဘယ်သူပြုကြ, သင်နိုင်ငံသားများဖို့တစ်ခုခုရှိသည်။ ငါအပြတ်အသတ်ဇုန်အတွက်ညာဘက်အဆောက်အဦးအောင်ဘယ်လိုလူထုများ၏သမ္မာသတိကိုစွန့်ခွာ။ ကြှနျုပျတို့ကြောင့်မြေပြိုမှု၏အလုပ်လုပ်လို့မရဘူး .. အဆိုပါ 2005 ပြောင်းလဲခြင်းခုနှစ်တွင် Kadifekale ကနေစတင်ခဲ့ပါတယ်။ အဖြစ်ကွံမ would're .. "
"ကျနော်တို့ကတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအပေါ်လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ အစိုးရကိုယ်စားလှယ်များ, အားလုံးနိုင်ငံရေးပါတီများတာဝန်ရှိသူများ, ကျနော်တို့ပါလီမန်စီမံကိန်းနှင့်ဘတ်ဂျက်ကော်မရှင်သို့စာတစ်စောင်ကိုစေလွှတ်။ , ငါသူတို့သူမကိုပြဋ္ဌာန်းပေးသောအားထုတ်မှုအဘို့ထိုသူတို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စကို၏နှလုံးကျနော်တို့အချိန်ကြာမြင့်စွာကအောက်ပါပြီဖြစ်ပါသည်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွင်းကိုစုသိမ်းသောသူတို့အားရှိခဲ့သည်။ အခုတော့သူသည်မိမိအရှေ့တွင်ဖွင့်လှစ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ဆွေများကိုဒီအယူအဆကိုတီထွင်ပါလိမ့်မည်နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ချက်ပြုတ်ပါလိမ့်မယ်။ ကားဂိုဒေါင်ငါတို့သည်ပိုက်ဆံစုဆောင်းမည်, run ပါလိမ့်မယ်။ ကြှနျုပျတို့သညျပွုပါမညျနံနက်ယံ၌ယာဉ်မောင်းများ၏ထိန်းချုပ်မှုကိုထိန်းချုပ်ရန်အရက်ကနေအားလုံးအဝတ်အစား။ လူတိုင်းတူညီတဲ့အဝတ်အစားတွေဝတ်ထားသည်ကားစံရလိမ့်မည်။ Izmir ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံသားအားလုံးသည်ဤစနစ်ကနေအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည်။ နိုင်ငံသားများသူတစ်ဦးထက်ပိုအကျိုးရှိအကောက်အခွန် ဝင်. သည်အထိပေးဆောင်ရပါလိမ့်မယ်။ "
ဝန်ကြီး Eroglu: အစာရှောင်ခြင်းခံတွင်းကိုက်ညီမပြုခဲ့
သစ်တောနှင့်ရေဝန်ကြီး Veysel Eroglu ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်များအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့။ ငါတို့အဘို့အက 'Bird ကိုသန့်ရှင်းရာဌာနမဟုတ်ခဲ့, ငှက်ရေငတ်ဦးသေဆုံးခဲ့သည် "ဟုသူကပြောပါတယ်။ ကျနော်တို့ Menemen Left Bank Bird ကိုသန့်ရှင်းရာဌာနထံမှအဆက်မပြတ်ရေဖို့ရှိသည်။ အဲဒီမှာမှတ်တမ်းများ။ ငှက်ပြည်ထောင်စုကိုလည်းပိုက်ဆံပေးချေ။ သဘာဝပစ္စည်းများ 22 ကီလိုမီတာလမ်းဆောင်ပုဒ်စေပြီ။ Homa ဂွငါတို့သည်သူ့ကိုအကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏, ဝမ်းခွဲ။ ထိုအခါငါတို့သည်ကျွန်းရာ၌ခန့်ထားပြီ, ငါတို့လမ်းခရီးစဉ်ရာ၌ခန့်ထားပြီ, ကျနော်တို့တင်ပြချက်လုပ် Filamingo .. 8-10 ဒီအလုပ်ပစ္စည်းသန်းပေါင်ကြောင့်ငွေကို ယူ. , စောင့်ရှောက်မှု, ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, ကျနော်တို့ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုအာမခံပါသည်။ ကျနော်တို့ဒီလိုစှပျစှဲမဖြစ်နိုင်ပါလကျမခံကြဘူး! တစ်စုံတစ်ဦးကအဆင်သင့်ထားလျှင်၎င်း, ငါတို့ပင်ပန်းစွာလုပ်ဆောင်ခြင်း exploit သူတစ်ဦးလည်းမရှိလျှင်တောင်မှငါတို့ပင်ပန်းစွာလုပ်ဆောင်ခြင်းလဲလှယ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောမထားဘူး, ဒါကြောင့်ရေနှင့်သစ်တောများဝန်ကြီးဌာနဖြစ်ပါတယ်။ ပြုမိအဆိုပါအလုပျညာဘက်မဟုတ်ပါဘူး။ တဦးတည်းလည်း 'အဒေသခံအစိုးရပိုက်ဆံအားဖြင့် Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်လှေတျတျောမူသညျ, ကပြောပါတယ်။ ဒါဟာသူမခင်ပွန်းကိုစေလွှတ်ခြင်းရှိမရှိဆိုရမယ့်မုသားဖြစ်ပါတယ်။ ငွေကိုကြည်လင်သောအတွက်လှေတျတျောမသည်အဘယ်မှာရှိသွားပါ။ '' ငွေကိုသငျသညျသှားပါရှိရာအချို့ဖြစ်မဖြစ်နိုင်ပါပြီးတာနဲ့! ဤအရပ်ဌာနကိုအစိုးရအေဂျင်စီများ၏စာရင်းကိုင်မှတ်တမ်းများအတွက် .. အားလုံးရှိပါတယ်။ ဒီမှာဘာ Veysel ဆရာမမဟုတ်သလို Aziz က Kocaoglu အိတ်ကပ် .. စုံစမ်းစစ်ဆေးဝင်ငွေ, SAI နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဝင်ငွေကို examine ။ လောလောဆယ်ကဒီမှာပြီးသားဝန်ကြီးထိုသို့သောအကဲဖြတ်၏ .. မထိုက်မတန်။ ဿွာန်၏အထူးသဖြင့်နေ့ကိုအဘယ်သူမျှမထိုက်တန်နှင့်အတူပါးစပ်အစာရှောင်။ လူတိုင်းကျွန်တော်တစ်ဦးမုသာကိုသုံးသောကြသည်မဟုတ်သိတယ်။ ကျနော်တို့လူတွေကိုလဲလျောင်းစွပ်စွဲပါတယ်။ ကျနော်တို့လိုအပ်အဖြေတွေကိုအမျိုးမျိုးတို့ကိုပေးရမည်။ "
Veysel Eroglu လည်း Gordes ဆည်အကြောင်းဟောပြောသည်။ ဒါကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမရှိတော့အခုထီး၏ဇာတ်လမ်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါ့ကိုလည်းထံမှပင် AKP မတိုင်မီİzmirရဲ့ရေGördes'l 2010 နှစ်ပေါင်းကတည်းကပိုက်ဆံပေးချေမှုတောင်းဆို ... ဖြည့်ဆည်းဖို့ protocol ကိုပွငျဆငျအကြောင်းကိုကြှနျုပျတို့လညျး, ကိုပေးဆောင်နေကြသည်လိုအပ်ပါသည်။ ကျနော်တို့ပြီးသားဆည်များအတွက်ပေးဆောင်နေသော DSI ဥပဒေပြဌာန်းအရသိရသည်။ သို့သော်ဆည်ရေကိုင်မထားဘူး။ ကျွန်တော်တို့ကိုရေကိုမပေး, ရွှေ့ပြောင်းခံခဲ့ရသည်။ ယိုစိမ့်စရာရှိသောကြောင့်ယနေ့ခေတ်တွင်ကိုလည်းတတ်နိုင်သမျှဖြစ်ဘူး။ ဆည် 450 သန်းကုဗမီတာအမြင့်ဆုံးစွမ်းရည်; အားလုံးဟာ Optimum စွမ်းရည် 120 45 သန်းရေဆည်ကုဗမီတာသန်းကုဗမီတာ, ဒါပေမယ့်ပိုပြီးရေကိုင်လို့မရပါဘူး။ အကြှနျုပျတို့အားသို့သော်ကတိကဝတ် 58 သန်းကုဗမီတာ။ ဒါဟာစိုက်ပျိုးရေးအတွက်သန်းကုဗမီတာ 116 ပါလိမ့်မယ် .. ဒါပေမယ့်အပေါက်ပိတ်ပစ်ခဲ့သည်ဆည်ပိတ်နိုင်ဘူး။ ကျွန်တော်တစ်ဦးဆေးကုသမှုများလုပ်ပါ။ သူတို့ကအတော်များများပျောက်ဆုံးနေကျနော်တို့အမှားတွေကိုမြင်ကြှနျုပျတို့သညျဤလမ်းအတွက်ကျနော်တို့ဒီမျဉ်းကိုကျော် ယူ. မသွားနိုင်ဟုပြော .. လိုင်းလုပ်ပေမယ့်စက္ကူပေါ်တက်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ pump ဘူတာနှင့်ပင်ရှိပြဿနာများကို။ ဒါဝေးကိုသူကျွန်တော်တို့ကိုတောင်မှရေကိုမပေးရဲ့။ သူကကျွန်တော် Belkahve မှာအသစ်တခုကုသမှုလုပ်နိုင်အောင်မကြိုးစားနိုင်ဘူး။ ရှိနေတုန်းပဲကန်ထရိုက်တာ။ ကုသမှုယခုနှစ် 1,5 ဘို့ကျော်ရှိ၏ သူတို့ပြဿနာကိုလည်းရေနှင့်စမ်းသပ်လို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျနော်တို့မကယ်မလွှတ်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မှားယွင်းနေသည်, restock, သူတို့ကပြီးပြည့်စုံမဟုတျပါဘူး။ သူတို့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ကိုလက်ခံခဲ့တယျကွောငျ့ကြှနျုပျတို့သညျကွား။ ကျနော်တို့ထိုကဲ့သို့သောကြီးမားပြဿနာကြုံတွေ့ရလျက်ရှိသည်။ '' အဘယ်ကြောင့်သင်ရေလောင်းပြီမဟုတ်လော '' ကျွန်တော်ဟုပြောသည့်အခါတွင်လည်း '' ရေ Tahtalidag ရှိပါတယ် '' ဟုသူကပြောပါတယ်။ အရာတစ်ခုမှာစုစုပေါင်း။ သငျသညျ Gordes မှ izsu 2010 နှစ်ပေါင်းထံမှပိုက်ဆံယူပြီးဖွင့်ကတည်းက။ ဒါကြောင့်သင်ကငါ့ကိုရေကိုပေးတော်မူ၏။ ငါလျှပ်စစ်ဆွဲဆောင်Halkapınarကနေမြေအောက်ရေနှုန်းကိုလျှော့ချပေါ့ Menemen ထံမှSarıkız, အ Goksu ထံမှပေးပါ။ ပြည်နယ်အဖွဲ့အစည်းများအကြားမျှထိုကဲ့သို့သောကြားဆက်ဆံရေး။ ငါသညျရေ Tahtalidag လောင်းများအတွက်မြစ်ဖို့ပင်လယ်ကနေရေတစ်စက်မပို့ကြဘူးဒါပေမဲ့သင်မထားနိုင်ပါ။ ငါသူစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍမှပေးသည်ဟောပြောချက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားပေးထား; ဒါကြောင့်မိုးရွာသည့်အခါ, ရေကြီးခြင်းမဟုတ်အာရပ်မိန်းကလေးရဲ့ဖန်တဆင့်စီးဆင်း! သင်ကဆည်ရေကိုင်ကြပါဘူး။ နှစ်ပေါင်းအဘို့, DSI အထွေထွေညွှန်ကြားမှုပြုသဖြင့်, သငျသညျအချိန်ကြာမြင့်စွာဓမ်မအမှုအတှကျကလုပ်နေတာပါပဲ။ သူတို့ရှိအလိုတော်ပါသလား ဒါဟာစိတ်ကိုအတွက်ယုတ္တိဗေဒယူမလာတာလဲ? တစ်ခုခုကိုအရေအတွက်ကဝန်ကြီးတွေသို့မဟုတ်ဝန်ကြီးများ၏နံပါတ်သိရညာဘက်သတင်းအချက်အလက်မပေးသောဖြစ်ပါတယ်။ '' ကြောင်းတရားစီရငျထဲကရေကိုသိရန်ပေါ်ထွန်းတော်မူသောအခါအကြှနျုပျကို Tahtalidag အဘယ်ကြောင့်ပေးစေ။ "
သူသည်အဘယ်အရပ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏ 77 ဘီလီယံကိုပေါင်?
"ဝန်ကြီး Eroglu မမှန်ပါဘူးဖော်ပြရန် '' Izmir've အတွက် 77 ဘီလီယံခန့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုသောအမှု '! ပြည်နယ်အရှိဆုံးစက္ကူစာရွက်စာတမ်းများထုတ်လုပ်သည်။ ပြည်နယ် 80 ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်စာရေးဆရာထားပါ။ ဤသည်ကိုလည်းထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင်တစ်စုံတစ်ဦးကမကောင်းတဲ့ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်မြို့ပြပြောအတွက်စာရွက်စာတမ်းများကိုစုဝေးစေတော်မူပြီ တစ်နေရာတည်းတွင်သေချာပေါက်တူးဖော် DSI သို့မဟုတ်တစ်ဦးသို့မဟုတ်ပတ်ဝန်းကျင်ဝန်ကြီးဌာနအတွက်။ တစ်ဦးကိုသူ့အဘို့နိုငျငံရေး, ထိုဗျူရိုကရေစီကနေလူနှင့်ဝန်ကြီးဌာနများ 'ငါတို့လုပ် Izmir 77 ဘီလီယံခန့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု' 'ဟုမဆိုနိုင်ပါ။ 24 ဘီလီယံဝန်ကြီးထံမှလာ, တစ်ဦးန်ကြီး 35 ဘီလီယံအထိကြွလာ 77 ဘီလီယံကိုပေါင်တစ်န်ကြီးကပြောပါတယ်။ ဘဏ္ဍာရေး, ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီးဌာန၏အဘယျ, မဘာ TSI အတွက်ထိုကဲ့သို့သောပုံ။ သို့သော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းခြောက်လကျော်; ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကနေ 12-13 14 ဘီလီယံကိုပေါင်တစ်နှစ်လောက်။ "
"ဒေသဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးထဲကလုပ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲများစစ်မှန်တဲ့မဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်တို့ဒါကြောင့်ကျနော်တို့အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကိုတာပေါ့ပါလီမန်နှင့်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် AKP ပြည်နယ်ဥက္ကဌလွှတ်တော်နှင့်ပါလီမန်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ Aziz က Kocaoglu အဖွဲ့ဝင်များနှင့်အဆက်မပြတ်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးမှပြောနေတာ။ သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုတဆင့်နိုင်ငံရေးကိုယူဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်။ ထိုသူတို့သည်မိမိတို့အပြန်လည်သုံးသပ်ဘယ်လို, ကျွန်တော်တို့ကိုလောင်ကျွမ်းပုံကိုသူတို့-မဲပြန်လည်ပါလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ ငါဝေဖန်ခံရပေမယ့်ပြင်းထန်စွာရှုတ်ချအလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်ပေတကားဟုကျွန်တော်တို့ကိုsataşarakမဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်တို့အလယ်၌ရာ၌ခန့်ထားပြီကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ။ '' သူကဘာလုပ်ခဲ့သလဲ အဘယ်သူမျှမစီးပွားရေး, ဗျာဒိတ်ရူပါရုံအလယ်မှာ "ဟုအဆိုပါခရိုင်၏ဥက္ကဋ္ဌ .. ဒီရူပါရုံကိုလည်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်လုပ်ပြောပါတယ်မဟုတ်လော သင်နှစ်ကြိမ်ပြည်နယ်သမ္မတဖြစ်လာပြီး4ပါလီမန်တစ်နှစ် ပြု. , သင့်ရဲ့ရူပါရုံကိုအဘယျသို့င်ကျနော်တို့တွေ့မြင်! လက်ထောက် Atilla Kaya, ငါတို့ကအဘယ်အရာကို၏ရူပါရုံကိုကြည့်ပါ။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကညီလာခံ Bilal Dogan ၏ရူပါရုံကနေငါသိ၏။ သူတို့ယေဘုယျအားဖြင့်နိုင်ငံရေးမှပြန်လာစေခြင်းငှါ, အဓိကအမှုအရာ။ ဒါဟာအမှန်တရားပါပဲ။ ရွေးကောက်ပွဲဒေသခံနိုင်ငံရေးစတင်ယခုပင်လျှင်ပြီးနောက်။ ငါသူတို့ကဒေသခံနိုင်ငံရေး၏လေ့ကျင့်ရေးလုပ်နေပါတယ်အထွေထွေနိုင်ငံရေးမယဇျပူဇျောဆိုပါစို့။ "
"မစ္စတာဝန်ကြီးချုပ်, အဘယ်ကြောင့် 14 နှစ်ပေါင်းတစ်ဦးအလွန်ကောင်းသောအလုပ်ရာ၌ခန့်ထားပြီဖြစ်ပါတယ်။ ငါဝန်ကြီးချုပ် Binali Bey တစ်ဦးချင်းစီကတခြားပွောပွီသင့်ကြောင်းပထမဦးဆုံးအကြိမ် ... ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထောက်ခံမှုအရှိန်မြှင့်ပေမယ့်နောက်ကျစီမံကိန်းများကိုကြပြီမဟုတ်။ ကျနော်တို့ကဒီမက်ထရို၏ခွင့်ပြုချက်ကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြသည်။ Mavişehirဆိပ်ခံတံတားတစ်ခုလက်မှတ်တံဆိပ်ခေါင်းပိုက်ဆံ, မပြုကိုမျှော်လင့် .. ငါအလုပ်မဟုတ်တော့ချိန်းဖွင့်အပ်ပေးတော်မူ၏။ ထူးအိမ်သင် Muharram သည်ဤအရေးကိစ္စများကိုနိုင်ငံတော်သမ္မတမပါဘဲဖြေရှင်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ တန်ခိုးမရှိ, ငါမျှော်လင့်ထားလိမ့်မယ်အရာနှငျ့မစပိုင်ခွင့်။ ငါမည်သူမဆိုချင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ငါပြီးသားချင်သိတယ်သူတစ်ကောင်လေးမဟုတ်ဘူး။ '' အကယ်. သင့်ရဲ့ဆိုင် 'သို့မဟုတ်' 'အဘယ်သူမျှမငါ့အစ်ကို,' ငါဆိုတတ်ကြ၏။ ထိုလူကဒီတိုင်းပြည်အတွက်ဖြစ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ အာဏာပိုင်, အနေအထား, ငွေ, တံဆိပ်ခေါင်းများ, ယာယီ .. ကျနော်တို့ကိုသူတို့ရှိသမျှသည်ပထမဦးဆုံးလာရှိသောလူဖြစ်ဖို့ရှိသည်။ "
Kocaoglu, Narlıdereİzmirတဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်က Metro ...
နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် Kocaoglu Tram ၏ဝေဖန်တုံ့ပြန်
Kocaoglu: "İzmir၏ဓါတ်ရထား, Will လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်"
Kocaoglu: "ကျနော်တို့ကရထားလမ်းစနစ်များအတွက်တထောင်ခရီးသည် 800 တာပေါ့"
မြို့တော်ဝန် Kocaoglu: "ရထားပို့ဆောင်ရေးမရှိမဖြစ် Tool ကိုက"
ကိုကိုပေါက“ 2005 ကတည်းက sinceZBAN တွင်အချက်ပြခြင်း…
ငါငါ့လက်ကိုမီထရိုသည်ဘိုင်ပြတ် Kocaoglu Da လျှောက်လွှာခဲ့ကြသည်ရှိခဲ့ဘူးလိုလျှင်
တူရကီအတွက် Kocaoglu ရထားစနစ်ခေါင်းဆောင်များဖြစ်ကြသည်
ဝေဖန်သူများ Kocaoglu İZBAN Tariff ဆီသို့အဖြေများခဲ့ကြသည်
İZBANဖို့ CAP ကနေKocaoğlu'nunတုံ့ပြန်မှု
အိမ်ကြီးဓါတ်ရထားလိုင်းကသမ္မတ Kocaoglu အတွက်ပထမဦးစွာအချိန် Make
Izmir ဂလားပင်လယ်အော် Crossing
Aziz က Kocaoglu
Kayseri မြို့တော်, ခရိုင်ကတ္တရာသုံးရာသီဖွင့်လှစ်
ဒါဟာကိုးက Metro လိုင်းBağcılar'aကနေသွားပါလိမ့်မယ်